दाङमा एक रातमा बनेको यो मन्दिर : देवी-देवताले बनाएको रे..!! - Rajmarg Online
दाङमा एक रातमा बनेको यो मन्दिर : देवी-देवताले बनाएको रे..!!
दाङ, १० बैशाख । एउटा मन्दिर बन्न कतिदिन लाग्छ ? एक दिन, एक हप्ता, एक महिना वा थप बढी समय लाग्छ । सामान्यतया हामी एक दिनमा मन्दिर बन्ने कुरामा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । सामान्य मन्दिरजस्तो आकार निकाल्न पनि एक हप्ता त लाग्छ होला भनेर हामी भन्ने सक्छौँ । अथवा त्यस किसिमको अनुमान गर्न सक्छौँ ।
तर दाङमा एक रातमा बनेको मन्दिर छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १० उत्तर अम्राइमा ‘मन्ठोरिया’ नामले चिनिने एक रातमा बनेको मन्दिर भएपनि प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा छ । मन्दिर बनेको कुन मितिमा हो बुढापाखाहरु पनि थाहा पाउदैनन् । एक रातमा बनेको मन्दिर भन्नुबाहेक मन्दिरका विषयमा अन्य खोज अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
‘एक रातमा बनेको हो रे मन्दिर, हाम्रा बाउबाजेले त्यहि भन्थे ।’ उत्तर अम्राइका ७४ वर्षीय देवुलाल थारुले भन्नुभयो । उहाँलाई पनि एक रातमा बनेको भन्ने बाहेक अरु थप जानकारी छैन ।
देवुलालाई थप जानकारी नभएको जस्तै एक रातमा बनेको मन्दिर कसले बनाएको भन्ने तथ्य अहिलेसम्म खुलेको छैन । मन्दिर आफै बनेको हो कि कसैले बनाएको भन्ने बारे थाहा नभएको दुवेलाल बताउनुहुन्छ ।
‘केहि थाहा छैन । मन्दिर कसरी बन्यो । विहान उठ्नेबेला मन्दिर थियो रे,’ उहाँले भन्नुभयो । पहिले रातिमा देवीदेवता हिड्ने बेला उनीहरुले नै मन्दिर बनाएको हुन सक्ने देवुलाल आँकलन गर्नुहुन्छ । ‘देवीदेवता त रातिमा हिड्छन् । उनीहरुले बनाए होलान,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भालेबासेपछि छाडेर हिडे ।’
ठूलो सिमलको बुटाको आडमा बनेको मन्दिर पूरा बनेको थिएन । विहान उठ्ने समय करिब १० फिट अग्लो बनाइएको मन्दिरको छाना थिएन । खुलै रहेको थियो । यहाँ मन्दिर बनेपछि स्थानीयले पुजाआजसमेत गर्न थालेका थिए ।
अहिले पनि यस मन्दिरमा पुजा गरिन्छ । माघीको ४ र ५ गते दुई दिन मन्दिर परिसरमा मेलासमेत लाग्ने गरेको छ । त्यसदिन पुजाआजासमेत हुने गरेको स्थानीय जिवनी चौधरीले बताउनुभयो ।
मन्दिरमा पाठपुजा हुन थालेपछि माथि छाना थपेर मिन्दरको आकार दिइएको छ ।
यस मन्दिरको सम्बन्ध भारतको पाटन मन्दिरसँग सम्बन्ध रहेको देवुलाल बताउँछन् । साथै घोराही १७ मा रहेको चौघेरा मन्दिरसँग पनि यस मन्दिरको सम्बन्ध रहेको उनले जानकारी दिनुभयो ।
घोराहीका चौघेरा तथा भारतको पाटन मन्दिरको चर्चा हुने गरेपनि यस मन्ठोरिया मन्दिर भने ओझेलमा रहेको छ । जहाँ अहिले पनि दैनिक पुजापाठ हुन सकेको छैन । माघको ४ र ५ गते मात्र मन्दिरमा पुजारीले पुजापाठ गर्ने गरेका छन् ।
अघिपछि स्थानीय आफै गएर पुजाआज गर्ने गरेको जिवनीले बताइन । टाढाबाट घुम्न आउने नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस मन्दिरमा जानका लागि घोराहीबाट नरायणपुर बजार पुग्नु अघि सौडिकुलाबाट उत्तर तर्फ जानुपर्छ ।
मन्दिर बनाउन ढुंगा प्रयोग गरिएको छैन
यस मन्ठोरिया मन्दिर बनाउनका लागि कुनै पनि ढुंगा प्रयोग गरिएको छैन । मन्दिर कुन मितिमा बनेको थाहा नभएपनि यस मन्दिरमा ईट्टा प्रयोग गरिएको छ । तर ईट्टा आजभोली बजारमा पाइने गरिएको जस्तो नभएर ठूला अकारका रहेको जिवनी बताउनुहुन्छ ।
‘यस मन्दिरमा प्रयोग गरिएको ईट्टा आजभोली बजारमा पाइने भन्दा लामा र चेप्टा पनि छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्दिरमा ईट्टा प्रयोग गरिएकोमा देवुलाल पनि आश्चार्य प्रटक गर्नुहुन्छ । ‘ढुंगा छैन । काचो ईट्टा पनि होइन । अर्कैखालको ईट्टा प्रयोग गरेर मन्दिरको भित्ता बनाइएको छ,’ उहाँले आश्चार्य प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ‘एकरातमा मन्दिर बनाउँदा कहिले ईट्टा बन्यो ! कहिले पकायो ! अनि कतिबेला मन्दिर बन्यो !’
मन्दिर बनाउन भित्तामा ईट्टा मात्र हाइन मन्दिर परिसरमा कुदिएका ढुंगा पनि रहेका छन् । लामा, चेप्टा आकारका ढुंगाहरु अहिले पनि मन्दिर परिसरमा पाउन सकिन्छ । मन्दिरको दक्षिणमा पानीको कुवा पनि रहेको छ ।
मन्दिरमा भाकल गरे पुग्ने विश्वास
मन्ठोरिया मन्दिरमा भाकल (मागेको पुग्नु) गरेको कुरा पूरा हुने स्थानीय विश्वास गर्छन । खेतमा धान रोप्ने समयमा पानी परेन भने असार, साउन महिनामा स्थानीयले पानी माग्नका लागि यस मन्दिरमा पुजाआजा गर्ने गर्दछन् । मन्दि आसपासमा रहेका ७ गाउँले बोका, चल्ला लगेर पुजेपछि पानी पर्ने विश्वस गर्छन ।
‘धान रोप्ने समयमा पानी नआएपछि यहाँ ७ गाउँकाले पुजा गर्छन,’ स्थानीय जीवन चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘पानी नआएसम्म यहि पुजा गरिरहन्छन् । अनि पानी पर्छ ।’ उहाँले अन्य भाकल गरे पनि पुग्ने बताउनुभयो ।
Prevसर्वोदय पुस्तकालयको मुखपत्र सर्वोदय पुस्तकको विमोचन
Nextदाङ जिल्ला फुटबल संघको अध्यक्षमा धिताल चयन